Waxaa maanta magaalada Garoowe ee caasimada Dawlada Puntland ka furmay Tababar ku saabsan u kuur gelida iyo samaynta cilmi baarista tayeynta wax-soo saarka beeraha Puntland kaas oo ay iska kaashadeen Wasaaradda Deeganka,Beeraha iyo isbedelka Isbedelka cimilada Puntland oo kaa shanaysa Haya”ada CEFA iyo machadka cilmi baarsita SADAR institute.
Wasaaradda Deegaanka, Beeraha iyo isbedelka cimilada DPL oo kaashanaysa hay’adda UNDP ayaa magaalada Garoowe ku qabatay shir wadatashi ah oo ku saabsan Maaraynta Khayraadka Dabiiciga ah iyo fulinta heshiisyada caalamiga ah ee maamulka Khayraadka ah.
Wasiirka Wasaaradda Deegaanka,Beeraha iyo isbedelka Cimilada Prof. Ismaaciil Diiriye Gamadiid iyo masuuliyiin kale oo kamid wasaaradda ayaa maanta booqday Jamacada Boosaso University xarunteeda dhexe ee magaalada Boosaaso gaar ahaan kuliyada Beeraha iyo Xanaanada xoolaha.
Waxaa maanta xarunta dhexe ee wasaaradda deegaanka, Beeraha iyo Isbedelka cimilada DPL ka dhacay shir ay yeesheen madaxda wasaaradda deegaanka iyo madax sare oo ka socotay Barnaamijka hormarinta u qaabilsan Qaramada Midoobey ee UNDP.
Wasiirka wasaarada Deegaanka, Beeraha iyo Isbedelka cimilada Mudane, Ismaaciil Diiriye Gamadiid iyo wasiir kuxigeenka wasaarada Sucaad Saalax Nuur ayaa kormeer shaqo kutagay xafiisyada Deegaanka iyo Beeraha ee kuyaala magaalada Boosaaso.
Wasaaradda Deeganka,Beeraha iyo Isbedelka Cimilada Dawlada Puntland oo kaashanaysa iskaashatada beeralayda Puntland ayaa ka qayb qaadatay Carwada bandhiga ganacsiga Puntland oo maanta ka dhacday magaalada Boosaaso, Waxaana uu bandhigani ahaa mid muhiim ah oo lagu soo bandhigay kobaca iyo hormarka dhaqaalaha ee Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya.
Wasaaradda Deegaanka & Beeraha oo la kulanta Bulshada Ballay.
Waxaa maanta deegaanka Balay ee degmada Garoowe si wadajir ah u booqday maamulka Gobolka Nugaal, kan degmada Garoowe iyo masuuliyiinta wasaarada Deegaanka, Beeraha iyo Isbedelka cimilada DPL.
Xarunta xakamaynta Ayaxa ee Soomaaliya oo laga dhagax dhigay Qardho.
Waxaa maanta magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar gaaray wafti isugu jiray wasiirada Deegaanka, Beeraha iyo Isbedelka cimilada DPL, wasiirka Beeraha ee Soomaaliya iyo madax ka socotay hay’adda beeraha aduunka ee FAO kuwaas oo si diiran loogu soo dhaweeyey magaalada Qardho.
Wasaaradda Deegaanka,Beeraha iyo Isbedelka cimilada iyo CEFA oo kulmay.
Waxaa maanta xarunta dhexe ee wasaaradda Deegaanka, Beeraha iyo Isbedelka cimilada DPL ka dhacay shir ay yeesheen madaxda wasaaradda Deegaanka iyo Madax ka socotay hay’adda CEFA gaar ahaana Mashruuca joogtaynta timirta iyo Sugnaanta wax soosaarka ee Soomaaliya.
Wasiirka Wasaarada Deegaanka, Beeraha iyo Isbedelka Cimilada Prof, Ismaaciil Diiriye Gamadiid, Gudoomiyaha Gudiga dhowrista Deegaanka iyo Khayraadka dabiiciga ah ee golaha wakiilada Puntland Xildhibaan Fu’aad Abshir Axmed, kuxigeenkiisa Xildhibaan Xusseen Axmed Nuur, Agaasimeyaasha guud ee wasaaradaha Deegaanka iyo Warfaafinta & Maamulka degmada Burtinle ayaa kormeer kusoo sameeyey tayada iyo qaab dhismeedka mashaariic biyo xireeno ah oo ay wasaaradda Deegaanka oo kaashanaysa hay’adda GIZ ka fulisay deegaanada Burtinle, Faratooyo iyo Farjano.
Wasaarada Deegaanka iyo UNDP oo shirweyne Wacyigelin ah ku qabtay Garoowe.
Wasiirka Wasiirka Wasaarada Deegaanka iyo Beeraha oo booqday beeraha gobolka Mudug.